Taliyeyaasha Ciidanka Booliska iyo Asluubta oo Ciidanka ku sugan Muqdisho la qeybsaday Farxadda Ciidul Adxaa – Radio Muqdisho
Taliyeyaasha Ciidanka Booliska iyo Asluubta oo Ciidanka ku sugan Muqdisho la qeybsaday Farxadda Ciidul Adxaa
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Bashiir Cabdi Maxamed “Ameeriko” iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed S/guud Bashiir Maxamed Jaamac “Keynaan” oo ay weliyeen taliye ku xiggeenka koowaad ee Booliska S/guuto Saciid Axmed Kadiye iyo Saraakiil kale, ayaa maanta Kormeer shaqo ku tagay Ciidanka ammaanka ee ku sugan magaaladda Muqdisho.
Kormeerka, ayaa ka bilowday Deegaanka Gubadleey, Shineemo Cabdi Waayeel, Saldhigga Degmadda Heliwaa, fadhiyada Ciidanka ee degmadda Deyniile, Ceelasha Biyaha iyo deegaanka Jaziira, waxaana Ciidankii goobahaasi ku sugnaa ay ku booriyeen inay adkeeyaan shaqadda Ummadda Soomaaliyeed ay u hayaan.
Taliyaha Ciidanka Asluubta iyo Taliyaha Ciidanka Booliska, ayaa la qadeeyey Ciidanka Ammaanka, waxaana kormeerkaan uu ahaa mid lagu dhiir gelinayo Ciidanka, sidoo kalana lagula qeybsanayo farxadda Munaasabadda maalinta Seddexaad ee Ciidul Adxaa.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeyo Gaas Bashiir Cabdi Maxamed “Ameeriko”, ayaa Warbaahinta Qaranka uga waramay Ujeedka Kormeerka ay maanta sameeyeen, isagoo xusay inay u kuur galayeen sida ay u socdaan Howlaha amniga lagu sugayo.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac “Keynaan” oo la hadlay Ciidanka ku sugan Kontaroolada laga soo galo Muqdisho, ayaa sheegay in Madaxda Qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed Ciidanka ay ku ammaanayaan Xaqiijinta Amniga.
Taliyaha iyo Abaanduulaha cusub ee Ciidanka Xoogga oo si rasmi ah Xilka ula wareegay “Sawirro”
Macalinkii hore ee Arsenal oo booqasho ku jooga dalka Liberia